Wasiiro katirsan Puntland oo loo diiday deegaano katirsan gobalka Sool & Wararkii u dambeeyey.
June 30, 2020 NEWS 11
LASCAANOOD(P-TIMES) – Wararka naga soo gaaraya magaalada Laascaanood ayaa sheegaya in xubno katirsan golaha wasiiradda Puntland iyo baarlamanka ay doonayeen in ay booqdaan deegaano kamid ah gobalka Sool, halkaas oo ay doonayeen in ay mashaariic ka hirgaliyaan.
Xubno katirsan golaha wasiiradda Puntland & Xildhibaano baarlamaan ayay Somaliland ka hor istaagtay in ay tagan deegaano kamid ah gobalka Sool, gaar ahaana deegaanka Karin-Dabaylweyn.
Ciidamada Somaliland ayaa ka saaray deegaankaas wasiiradda waxbarashada, Caafimaadka iyo Xildhibaano katirsan baarlamaanka Puntland, sida ay xaqiijinayaan ilo madax banaan.
Gudoomiyaha gobalka Sool ee Somaliland Cabdiqani Maxamuud Jiindhe ayaa bartisa Facebook-ga ku xaqiijiyey jiritaanka warkan, isagoo sheegay in ciidamadooda kahortageen arrintaas.
“Waxaan ka saarnay deegaanka Karin-dabaylweyn ee gobolka Sool xubno ka tirsan maamulka Puntland ee Dalka Soomaaliya. Raggan, oo kala ahaa wasiirkooda caafimmaadka, wasiirka Waxbarashada & xubin xildhibaan Barlamaan, ayaa deg-deg uga haleelay halkay ka yimadeen, ka dib markay ka hawl galeen ciidammada heegganka ugu jira sugidda xuduudaha gobolkan Sool. Gor-gortan marna kama galayno, in lagu soo xadgudbo xuduudaha Dastuuriga ah ee Somaliland ee ka tirsan ciidda gobolkan aan hoggaanka ka ahay ee Sool, isla markaana ajande siyaasadeed oo kan Somaliland ka baxsan, lalama imaan karo, kamana dhex shaqayn karo” ayuu yiri Gudoomiyaha gobalka Sool.
Kooxda Deni shacabkii waale siday hadba meel ugu jeedinayeen ayagoo fashilkooda siyaasadeed ku qarinaya.
Maamulka Iyo Maaraynta Waxaa ka horeeeya inaad Awood u
Leedahay Amarkaagu inuu socdo.
Nasiib daro AMA Nasiib wanaag ba Puntland dhulkaa waxaa xoog looga qabsaday 2007.
Illaa inta xoog ku soo qabsanaysana saas uun baa loo bahdili.
Dee faduul bay markii horeba ahayd, inay JSL iska soo galaan. Miyay soo anbadeen tolow?
Jeelka Madheera hala geeyo hadii ay mardanbe soo laabtaan!
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
10 nin oo iidoor waxay u dhigmaan hal nin oo Ogaadeen ah.
10 nin oo Dhulbahante waxay u dhigmaan hal nin oo Iidoor ah.
Isticmaarkii ingiriiska ayaa sidaa dhulbahante ka hoos marshey Iidoor,
Tiibaa wali taagan. Dhulbahante sidaas ayuu ahaan inta uu ILAAHEY nin geesi oo midideeya uu ka soo saarayo.
KKKKKKKKKKKKKKKK, WAA RUNTAA.
Nacaas, sidee iso u barbardhigta Ashraafta iyo Ogaadeen?
Waar hoy dagaalna haysku furina hadaad dhabanada haysataanee.
Waxay la ordayaan urur siyaasadeedka Deni.
XAQIIQDA MARKA LAGA HADLO WEY QALDAN TAHAY IN WASIIRO REER PUNTLAND INAY TAGAAN LASCAANOOD AMABA SOOL WAAYO DADKII DEEGANKA AYAA OGOL 8N IN LA HEYSTO… PUNTLAND WAXEEY KU TAAGAN TAHAY SIYAAD GURACAN HA BADASHO SIYAASADEEDA…. HANA ISKU TASHATO BARRI, NUGAAL IYO BAR MUDUG WEY KU FILIN TAHAT MEELWALBA YEYSAN PROBLEM ISAGA FURIN. DADKA REER PUNTLAND WAA DAD XADAARAD DHEER DAD WANAAGSAN AH PUNTLAND WAXA DHISAY WAA DADKA MA AHA ( KOOX YAR OO TUUGA AH U TALISA), XAQIIQDA MARKA LAGA HADLO PUNTLAND WALIGEED MA YEELAN MADAXWEYNAHA HOGAAN FIICAN LAAAKIN DADKA AYAA WANAAGSAN.
DADKA PUNTLAND HA ISKU TASHTAAN,DHUL, DHAQAALE IYO DAD KU FILIN WEY HEYSTAAN.
Meeshan Iidoor iyo Majeerteen toona ma joogaan, gobolka Sool dadkiisii baa haysta, kuwa laga celiyeyna waa dadkiisii uun,
xaqiiqda yaan laga warwareegin oo busta hoosta laga gelin, indhaha iyo dhegahana la daboolan, haddii kale waligeedba beentaa halagu jiro. Sool waxa isku haysta dadkeedii, waxaana u Aawood roonaaday kuwa haysta maanta ee Chinach Somaliland. Kumaa u fiican odhan mayno oo. waa la iska arkaa, inamad yaryar ee qoraalada beenta soo qora , waxba yey xaqiiqda ka warwareegin, kuwa soo galay ee xagga Puntland waa reer Sool, kuwa ka celiyey waa reer Sool, cid kale kama celin karto, cid kale maba kala taqaano, Dhulbahante waxaa ka xumaaday hoggaanka oo iyagii kala raacay siyaasiyiintooda,
wixii kale waa been
Run badan ayaad sheegtay, laakiinse waad yara bakheyshay. Kkkk Sxb iska qir in Sool ay Somaliland horumar gaadhsiisay Puntland ay dhiig miirato ku aheyd. Afka Ingiriiska ayaa lagu yidhaa yaa leach/dhiig miirato or/ama nurturing/barbaariye. Intii ay Somaliland la wareegtey xukunka, Laaska waa lagu bulaalay halkii kolkay Budhleyn joogtey ay qaadhayeen. Kkkk
Waadse ku saxsantahay in kuwa Somaliland taabacsani ay ku awood roonyihiin meesha. Weligoodna iyaga ayaa ku quwad sareyn doona. Sababtuna waa Reer Sool waxey yihiin Reer Woqooyi/Somalilanders iyaguna gidigood sidaas ayay isku yaqaanaan. Xitaa ka Isaaqa necebi wuxuu qirsan yahay inuu Somalilander yahay. Reer Garoowe oo ay isku Ab yihiin oo ay weliba Nugaasha wada degaan waxey u yaqaanaan Walaweyn ama Reer Koonfureed. Sababtaas ayaa ah waxeyna weligood Abnimo ugu raaci doonin. Tusaalaha ugu wacani waa hadaad isku eegto Laaska inta gaadhi ee u kala gooshta Koonfur iyo Woqooyi waxa kun iyo kow jeer ka badan kuwa dhanka Woqooyi (Burco, Berbera, Hargeysa, Gebiley, Wajaale Boorame iyo Seylac) u kaca kuwa Gadhoowe iyo Boosaaso oo masaafo ka yar u jidha. Kkkkkkk Dhuuloosku waxey isku Dhaqan yihiin Iidoorka. Taasi mid la diidi karo ma ahan oo waa xaqiiqo ee ha’is moodsiin sxb. Reer Sool waa Somalilanders Asliyanba. Cid ka jari kartaa ma jirto. Inta xiqdigu diley iyo inta taagdari meelahaas ka niicleysaaba ma badali karto arintaas.
Kuwaan la haystoo deegaanka isku sheega, hadii aan dagaal qaadana iyagu qoryaha noo qaadanaya, Gumeysi bey rabaan, lama xoreyn karayo mar hadii iyagiiba kaa soo hor jeedaan, taladu waa in la iska daayo, . Kuwa Barlamaanka Puntland ku jira, la eryo ee ay jabhad sameystaan, ama Cali qaliif raacaan. meesha dad uma jeedo.